Gabaasa ‘OSG’: ‘Ji’oota jahaan darban Oromoonni 64 ajjeefaman’ - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGabaasa ‘OSG’: ‘Ji’oota jahaan darban Oromoonni 64 ajjeefaman’
Ji’oota jahan darban Oromoonni 64 akka malee ajjeefaman, 1400 ol kan ta’an ammoo akkanumaan qabamanii hidhamaniiru jedha gabaasni dhaabbata mirga namoomaa ‘Oromia Support Group’ baase.
(bbcafaanoromoo)—Gabaasi kun ajjeechaa akka malee loltoonni mootummaa Oromoota irratti raawwatan dabalatee sarbama mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaa ammaa jalatti baatii Waxabajjii bara 2019 irraa eegalee raawwatame of keessaa qaba.
<strongclass=”story-body__crosshead”>”Badhaasa Noobeeliitti qoosuudha”
ለኦሮሞ ልጆች የብልጽግና ፓርቲ ያስገኛቸው ትሩፋቶች በፎቶ– ከብዙ በጥቂቱ።
“#Akeekkachiisa_xumuraa. Abbaa Alangaa godina Arsii lixaa Obbo #Nageessoo_Qumbiitiif
“Ilmaan Oromoo akka ijoolleen kunniin itti hin murtoofne haa iyyinuuf.
“Ijoollee Oromoo gaafa hiriira balaaleffannaa yaaliin ajjeechaa #Jawaar irratti yaaliin geggeeffame Hiriira balaaleffannaa akkuma guutuu Oromiyaa baye. Godina Arsii lixaa #Dodola keessatti geggeeffame kunoo bifa armaan gadiitiin himannaa ulfaataa irratti bananii murtee itti kennuuf jiru. Maqaa namoota Ragaa sobaatiin ijoollee Oromoo irratti murteessifuuf ta’anii booda ifa goona. Akka gocha sobaa kana irraa dhaabbatan isaan gaafanna. Abbaan Alangaa godina Arsii lixaa Nagessoo Qumbii ijoollee tana yoo itti murtaaye ofumaaf rakkoo ofitti fidde. Abbaa Alangaa godina Arsii lixaa Nageessoo Qumbii gocha kana irraa deebi’i.
Abbaa Alangaa Godina Arsii Lixaa Nageessoo Qumbii kana jedhamu Ijoollee Teenna Irratti Ragaa Sassaabuudhaan himannaa banee jira Himannaaa kun Mana Amntii Orthodox balleessuu fi Amaara Barbadeessuu Akkasuma Qabeenya Saamuu kan jedhuun keeyyata hedduu Ulfaataa ta’e Keeyyata 539n himataa jira Himatamtoonni
1ffaa Qaasim Jimjimoo Bariisoo
2ffaa.Xaahir Qumbii Galgaluu
5ffaa. Boonaa Dibilloo
7ffaa Umar H/Gariibee Waashoo
8ffaa. Qaadiroo Abdoo Waariyoo
9ffa Tamaam Dibilloo.”
~ Maddi Miliyoon Galatoo.
Abbaa Barataa Addii Waaqoo kan dhihoo tannaa Yuunivarsitii Waldiyaatti ajjeeffame